စစ်တကောင်းတောင်တန်းနေ ဘုန်းကြီးများ မြန်မာနိုင်ငံမှအစွမ်းရောက်များနှင့် ပူးပေါင်းကြံစည် | Dr Ko Ko Gyi's Blog
မျက်နှာဖုံးများကို ဆွဲလှန်ခြင်း »
စစ်တကောင်းတောင်တန်းနေ ဘုန်းကြီးများ မြန်မာနိုင်ငံမှအစွမ်းရောက်များနှင့် ပူးပေါင်းကြံစည်
စစ်တကောင်း တောင်တန်းဒေသနေ အစွန်းရောက် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းကြီးများ က မြန်မာနိုင်ငံမှ အစွန်းရောက် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းကြီးများ ထူထောင်ထားသော ၉၆၉ အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်း ရန် စီစဉ်လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရပ်ကွက်များ၏အဆိုအရ သိရသည်။ယင်းကဲ့သို့ စီစဉ်နေသူများအထဲမှ အချို့သောသူများသည် မြန်မာနိုင်ငံထဲတွင် သင်တန်းများ တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် အချို့သော ၉၆၉ ဂိုဏ်းသားများသည် ထိုတောင်တန်းဒေသတွင် ယင်း တို့၏ အစွန်းရောက် လှုပ်ရှားမှုများကို စတင်ရန် စီစဉ်နေသည့် ဘုန်းကြီးများအား အကူအညီများပေးရန် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံအတွင်းသို့ အလည်အပတ်ရောက်ရှိလာ ခဲ့ကြောင်း ယင်းသတင်းရပ်ကွပ်များက ဆိုသည်။လွန်ခဲ့သော နှစ်အနည်းငယ်ခန့်ကစ၍ ၉၆၉ သည် မြန်မာဘုန်းကြီးများက စည်းရုံးခဲ့သည့် အစွန်းရောက် လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ တစ်ခုအဖြစ် လူသိများပြီး၊ အရှင် ဝီရသူ ဆိုသူသည် ယင်းအဖွဲ့၏ အဓိက စည်းရုံးရေးမှူး တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ဝီရသူသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် မူဆလင်ဆန့်ကျင်ရေး သွေးထိုး လှုံဆော်နေသူဖြစ်သည် ဟူ၍လည်း စွပ်စွဲခံထားရသူဖြစ်သည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇွန်လထုတ် တိုင်း(မ) မဂ္ဂဇင်းတွင် ဝီရသူအကြောင်းကို ဓါတ်ပုံနှင့်တကွ ရေသား ထားသော “The face of Buddhist terror”(ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အကြမ်းဖက်သမား၏ မျက်နှာ) ခေါင်း စဉ်ပါ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားသည်။ရိုက်တာသတင်းဌာန (Reuters) မှ စူးစမ်းလေ့လာ ထုတ်ဝေသော အစီရင်ခံစာတစ်စောင်က ၉၆၉ ၏ လှုပ်ရှားမှုများကို မြန်မာအစိုးရက ကျောထောက်နောက်ခံ ပြုသည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။အချို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသား အစွန်းရောက် ဘုန်းကြီးများက လွန်ခဲ့သည့် တစ်နှစ်ခန့်က မြန်မာနိုင်ငံအ တွင်းသို့ ဝင်ရောက်ခိုလှုံခဲ့ပြီး ၉၆၉ ဂိုဏ်းသားများထံမှ သေနတ် သုံးပုံသုံးနည်း သင်တန်းများ ရယူခဲ့ သည်။ထိုနောက်ပိုင်းတွင် စစ်တကောင်း တောင်တန်းဒေသမှ ဘုန်းကြီးများ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ သွားလာ လည်ပတ်မှုများ မြှင့်တက်လာကြပြီး၊ လစဉ် ခရီးသွားသူဦးရေ (၁၅) ယောက်မှ (၂၀) အထိ ရှိလာ သည်။ ယင်းကဲ့သို့ မြန်မာနိုင်ငံသို့ သွားရာတွင် နယ်စပ်အစောင့်အကြပ် ကင်းမဲ့သည့် ထန်ချီ နှင့် မီဇိုရမ် (Thanchi and Mizoram) မှတဆင့် သွားကြသည်။ယင်းစွပ်စွဲချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ ကမ္ဘာ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် သံဃာတော်များအသင်း (World Buddha Sashok Sebok Sangha) ၏ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူ Anupam Barua ပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက်ခဲ့ပြီး၊ အ ဆိုပါသတင်းအား စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် ဖန်တီးချက်နှင့် စိတ်ကူးယဉ်သက်သက် ဟူ၍ တင်စားပြောဆို ခဲ့သည်“အဲဒါတွေအားလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအပေါ် မကောင်းကြံစည်ထားတဲ့ မဟာ ဝါဒဖြန့်ချီရေးပါဘဲ” ဟု သူကဆိုသည်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ်ဒေသ စောင့်ကြပ်တပ်ဖွဲ့ (BGB) သတင်းရပ်ကွက်၏ အဆိုအရ၊ ယင်းတို့ အနေဖြင့် ဇူလိုင်လ (၁၂) ရက်နေ့ညက နိုက်ခေါင်းချရီ (Naikkongchhari) အပိုင်၊ ဂေါင်းဒုံး ယူနီယံ (GhundhumUnion)၊ တောင်ဘရူ ဘာဇား (Tumbru Bazat) မှ ဖမ်းဆီးခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံ သား အောင်ကံ ချက္ကမား (Aung Keng Chakma) က သူသည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဖက်သို့ Tumbru နှင့် Baishfar ရှေးတန်းနေရာများမှတဆင့် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက် လာခဲ့ကြောင်း၊ သူ့ဦးလေးဖြစ်သူ Keola Ching Chakma သည် Baishfari တွင် နေထိုင်လျက် ရှိကြောင်း ထွက်ဆိုချက် ပေးခဲ့သည်ဟု သိရသည်။BGB ဌာနချုပ်သို့ ပေးပို့ခဲ့သည် ထောက်လှမ်းရေး အစီရင်ခံစာတစ်စောင်တွင် Aung Keng Chakma သည် ၉၆၉ အဖွဲ့ ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး၊ နယ်စပ်အနီးအနားတွင် လှုပ်ရှားလျက်ရှိသည့် အဖွဲ့ဝင် (၁၀) ဦးပါ အဖွဲ့ခွဲတစ်ခုအား ဦးဆောင်နေသူ ဖြစ်ကြောင်း ပါရှိသည်။အဆိုပါ (၁၀) ဦးအနက် အချို့၏ အမည်များကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ရာ အောင်လှ၊ မောင်ရဲ ရှား၊ မောင်ဌေး၊ မောင်ကျော်ဖြူ တို့ဖြစ်ပြီး၊ ယင်းတို့အားလုံးသည် မြန်မာနိုင်ငံသားများဖြစ်သည်ဟု ပြော ဆိုခဲ့သည်။စစ်ဆေးမေးမြန်းခဲ့စဉ် Aung Keng Chakma က သူသည် အစွန်းရောက် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ ၏ ခေါင်းဆောင်ဟု စွပ်စွဲခံခဲ့ရသော Uuch Hala Bhante အား မကြာခဏ ဆက်သွယ်လေ့ရှိသည်ဟု ထွက်ဆိုချက်ပေးခဲ့သည်။ထောက်လှမ်းရေး အရာရှိများကလည်း Uuch Hala Bhante သည် ၉၆၉ အဖွဲ့နှင့် ဆက်နွယ်မှုရှိသည် ကို စုံစမ်းတွေ့ရှိခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ထိုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ Uuch Hala Bhante ထံမှ တစ်စုံတစ်ရာ ဝေဖန်ချက်ရယူရန် အကြိမ်များစွာ ကြိုးပမ်းခဲ့သော် လည်း အဆက်အသွယ် မရခဲ့ပေ။Uuch Hala Bhante နှင့် နီးစပ်သူ သူ့နောက်လိုက် Bacha Mang က thereport24.com အား ပြောခဲ့သည်မှာ ထိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်သည် ပူးပေါင်းကြံစည်မှု၏ သားကောင်တစ် ဦး ဖြစ်နေရကြောင်း၊ ယခုကဲ့သို့ ပေကျံသော စည်းရုံးလှုံဆော်မှုသည် ယင်းပူးပေါင်းကြံစည်မှု၏ အစိတ် အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ဟူ၍ဖြစ်သည်။“ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ အကြမ်းမဖက်တဲ့ ဘာသာတစ်ခုပါဘဲ၊ အခုလို သေနတ်ကိုင် အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ အ စွန်းရောက်သူတွေ အတွက် ဒီသာသနာမှာ နေစရာမရှိဘူး” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။“သူ အဲ့လို အိမ်နီးချင်း မြန်မာနိုင်ငံကို ခရီးသွားနေတဲ့ အကြောင်းဟာ မြန်မာ အာဏာပိုင်တွေက ဘုန်း ကြီးကျောင်းတစ်ခုကို လိုအပ်တဲ့ အစီအမံလုပ်နိုင်ဖို့အတွက် သူ့ကို အဲဒီမှာ မြေတစ်ကွက် ပေးထား တယ်။ များသောအားဖြင့် သူ မြန်မာနိုင်ငံ သွားတာက ဘာသာရေးအကြောင်းဘဲ ဖြစ်တယ်” ဟု သူက ဆက်လက်ပြောခဲ့သည်။ဇူလိုင်လ (၉) ရက်နေ့တွင် BGB တပ်ဖွဲ့ဝင်များက Prakash Chakma နှင့် Sumoy Chakma အမည်ရှိ ဘုန်းကြီး ညီ-အစ်ကိုဝမ်းကွဲနှစ်ဦးကို မြန်မာနိုင်ငံမှ သင်းတန်းများရယူပြီး ပြန်လာစဉ် ဖမ်းဆီးမိခဲ့သည်။ ယင်းတို့သည် Rangamati Sadar အပိုင် ဘာလူခါလီ ယူနီယံ (Balukhali Union) တွင် နေထိုင်သူ များဖြစ်သည်။ကော့(စ)ဘဇား BGB၊ အမှတ် (၁၇) တပ်ရင်း၏ တပ်မှူး ဒု-ဗိုလ်မှူးကြီး Khandaker Saiful Alam မှ thereport24.com သို့ပြောကြားရာ၌ ယင်းဘုန်းကြီးနှစ်ပါးကို ရှာဖွေခဲ့သောအခါ မြန်မာစာပေ ဘာသာစကားဖြင့် ရေးသားထားသည့် စာအုပ်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံထုတ် စားသောက်ဖွယ်ရာများ၊ မြန် မာနိုင်ငံမြေပုံ၊ Andriod လက်ကိုင်တယ်လီဖုန်းများ၊ Tablet ကွန် ပျူတာများ၊ ဘင်္ဂလာဒေ့ရ်ှသုံး SIM ကဒ်များ၊ Memory Card များ၊ အသေးစား Pen drive များ၊ HD ဗီဒီယို ကင်မရာများ၊ ဒီဂျီတဲလ် ကင်မ ရာများ ထို့အပြင် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပသုံးငွေများ ရရှိခဲ့သည်ဟု ပြောပြခဲ့သည်။“သူတို့ ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ လက်ကိုင်တယ်လီဖုန်းတွေမှာ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ နိုင်ငံသားတွေနဲ့ အဆက်အသွယ်လုပ် ထားတဲ့ သက်သေခံ အထောက်အထားတွေ ရရှိခဲ့တယ်” ဟု ယင်းက ဆိုထား သည်။သတင်းရပ်ကွက်များ၏ အဆိုအရ တောင်ပေါ်လူနည်းစု လူငယ်များ ယခုတလော တရားမဝင်နည်း လမ်းဖြင့် နယ်စပ်ကို ဖြတ်ကျော်ကာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ပြီး ၉၆၉ အဖွဲ့ဝင်များဆီမှ စစ် သင်တန်းများ ရယူလျက်ရှိသည်ဟု သိရသည်။ရဲများက Bhantes အသွားအလာလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုလေ့ရှိသော ယာဉ်များကို ရှာဖွေစစ်ဆေးခြင်းမရှိ သည်ကို အခွင့်ကောင်းယူလျက် လက်နက်ခဲယမ်းများနှင့် အခြားအသုံးအဆောင်များကို တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ သယ်ယူပို့ဆောင်မှုများ ပြုလုပ်ကြသည်။သတင်းရပ်ကွက်များ၏ အဆိုအရ လွန်ခဲ့သည့်နှစ် အကုန်ပိုင်းကာလအတွင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံမှ ဘုန်းကြီးမြောက်များ စွာတို့သည် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဝီရသူအားတွေ့ဆုံမှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၊ ထိုနောက်ပိုင်းတွင် ယင်းကဲ့သို့ ဘုန်းကြီးများက မြန်မာနိုင်ငံ သို့ သွားရောက် သင်တန်းရယူခြင်းကို စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။Thereport24.com အနေဖြင့် ယခုကဲ့သို့ ဘုန်းကြီးများက မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ၉၆၉ စခန်းများတွင် စစ် သင်တန်းများ တက်ရောက်သည့် ဓါတ်ပုံအထောက်အထားများကို လက်ဝယ်ရရှိခဲ့ပြီး၊ ထောက်လှမ်းများ က ယင်းဘုန်းကြီးများအထဲတွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသားများ ရှိ/မရှိ ဆိုသည်ကိုမူ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု များ ပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။ယခုကဲ့သို့ ဖြစ်နေသည်များကို အခြေခံ၍ နယ်စပ်လုံခြုံမှုတွင် လိုအပ်ချက်များ ရှိနေကြောင်း BGB အရာရှိ Khandaker Saiful Alam မှ ဝန်ခံခဲ့ပြီး ယင်းအချက်အလက်များကို အစိုးရသို့ တင်ပြခဲ့ ပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ဤဆိုးကျိုးများကို မကြာခင် ဖယ်ရှားနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်း၊ BGB တပ်များအနေဖြင့် ဘုန်းကြီး များ၏ လှုပ်ရှားမှုများကို သတိထားစောင့်ကြည့်နေသည်ဟု သူက ပြောခဲ့သည်။“ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနယ်စပ်နှင့် နီးစပ်တဲ့ဒေသတွေမှာ နေထိုင်လျက်ရှိတဲ့ မြန်မာဘုန်းကြီးများတွေက ဘင်္ဂ လားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသား ဘုန်းကြီးတွေကို တိတ်တဆိတ် ဆက်သွယ်ကြတယ်၊ ဒါပေမယ့် BGB တပ် သားတွေက အဲလို သူတို့ရဲ့ ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုနှိမ်နင်းနိုင်ဖို့ သတိကြီးကြီးနဲ့ စောင့်ကြည်လျက်ရှိတယ်” ဟု သူကဆက်လက် ပြောကြားခဲ့သည်။
(Source: thereport24 တွင် ဖော်ပြထားသည်ကို ကိုကိုလင်းမှ ဆီလျော်စွာ ဘာသာပြန်ဆိုထား သည်။)
This entry was posted on December 16, 2014 at 1:36 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.